एसिड आक्रमणमा परेकी दीपिका पादुकोण ‘छपाक’: – Namaste Khabar
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको सभा हुँदै आईपीओ निष्कासन मुख्य प्रस्ताव
नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको संस्थापक १०% सेयर सर्वसाधारणमा रुपान्तरण
एसिड आक्रमणमा परेकी दीपिका पादुकोण ‘छपाक’:
December 16, 2019 December 21, 2019 Namastekhabar0Comments
सन् २००५ मा नयाँ दिल्लीको सडकमा एसिड आक्रामणमा परेकी माल्ती नाम गरेकी एक यूवतीको कथामा तयार भएको चलचित्र ‘छपाक’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रमा माल्तीको भूमिकामा नायिका दीपिका पादुकोणले अभिनय गरेकी छिन् । एसिड आक्रमणमा परेकी दीपिका पादुकोण परेकी यूवतीको भूमिकामा देखाइएको छ ।
मेग्ना गुल्जारको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रलाई फक्स स्टार स्टूडियो, दीपिका पादुकोण, गोविन्द सिंह सन्धु र मेग्ना गुल्जारले निर्माण गरेका हुन् । अतिका चोहान र मेग्ना गुल्जारको लेखनमा तयार भएको यो चलचित्र सन् २०२० को जनवरी १० मा रिलिज हुँदैछ ।
भारतमा मात्र नभएर अहिले अन्य देश तथा नेपालमा पनि एसिड आक्रमणको घटना बढेको छ । यस चलचित्रले समाजमा सचेतना बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
साभार : अनलाइनखबर.कम
फेरि मार्छ की भन्ने चिन्ता थियो अब ढुक्क भएँ: संगीता
आफूलाई एसिड प्रहार युवक पक्राउ परेपछि अहिले संगीता खुसी संगसंगै आक्रोशित भएकि छिन् । २४ दिनपहिले एसिड आक्रमणमा परेर घाईते भएर राजधानीको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज अस्पतालमा उपचाररत संगीता मगरले आफूमाथि एसिड फाल्ने युवक पक्राउ परेपछि आवेग आएकी हुन् ।
उनी भनिन् मलाई त परीक्षाहलाट निस्केर त्यो अपराधीलाई पनि तेजाब नै छ्यापेर मैले जस्तो पिडा पाएकि छु त्यस्तै पीडा दिन मन लाग्यो । जीवनलाई एसिड फाल्न अधिकार दिन संगीताले आग्रह समेत गरिन् ।
उनले आफ्नो जीवन वर्वाद पार्ने अभियुक्तलाई कडा सजाय दिन माग गरेकी छिन् । फेरि एसिड फालेर मार्छ की भन्ने चिन्ता थियो, प्रहरी अंकलले त्यसलाई पक्राउ गर्नुभो, अब ढुक्क भएँ, त्रासबाट मुक्त भएँ,उनले भनिन् ।
संगीताले आफ्नो आक्रमणकारीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारिन् । अर्की घाईते सीमा बस्नेतले पनि पक्राउ परेको खबर सुनेर ढुक्क भएको बताईन् । ‘मनमा डर थियो, फेरि कतिबेला आउँछ भन्ने, त्यसलाई प्रहरी अंकलले समात्नुभयो, अब ढुक्क छु ।
एसिड फाल्ने अभियुक्त जीवन विकलाई आइतबार प्रहरीले अदालतमा बुझाउने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनलाई म्याद थपका लागि उपस्थित गराइने महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी पुस्कर कार्कीले बताउनुभयो ।
साभार : नेपालकानुन.कम
← जाडो मौसममा कसरी फिट रहने त ?
जापानीहरुको आयु किन लामो हुन्छ ? →
सलिनले फिल्म गर्न पाएनन् राम्रो स्क्रिप्ट
December 10, 2019 December 13, 2019 Namastekhabar 0
January 1, 2020 January 1, 2020 Namastekhabar 0
दोश्रो सिजनको विजेता ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’